Kitra any Nizeria: mbola hanazatra ny Super Eagles i Gernot Rohr | NewsMada
Kitra any Nizeria: mbola hanazatra ny Super Eagles i Gernot Rohr
Par Taratra sur 29/05/2020
Nohalavain’ny federasiona nizerianin’ny baolina kitra (NFF) ho roa taona ny fifanarahany amin’ilay mpanazatra mizaka ny zom-pirenena alemà sy frantsay, i Gernot Rohr. Hosoniavina amin’ny herinandro ho avy io izany fanavaozam-piaraha-miasa eo amin’ny roa tonta izany.
Tanjon’i Gernot Rohr amin’ity ny hahatafita ny ekipam-pirenen’i Nizeria amin’ny “Can 2021” sy ny “Mondial 2022”. Tsiahivina fa efa nanomboka ny taona 2016 ny nitantanan’i Gernot Rohr ny Super Eagles ka izy no nahatafakatra an-dry zareo Nizerianina niatrika ny dingana famaranana tamin’ny “Mondial 2018” sy ny “Can 2019”, natao tany Egypta, ka nahazoan’izy ireo ny medaly alimo.
Tsiahivina fa resin’ny Barea, tamin’ny isa 2 no ho 0, i Nizeria, teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona, nandritra ny “Can 2019”. Baolina matin’i Bolida sy ny “coup franc” nodakan’i Carolus ka nametraka ny Barea teo amin’ny laharana voalohany, tao amin’io vondrona niarahan’izy ireo io. Marihina fa manambady Malagasy ity mpanazatra ny Super Eagles ity.
Emission Ambarao (Alliance 92) – avec Michkael Reilly SOLOFONIAINA – Directeur de Cabinet adjoint (CUA) vm #Audio 23/09/2020
Emission Ambarao (Alliance 92) – avec Michkael Reilly SOLOFONIAINA – Directeur de Cabinet adjoint (CUA) vf #Audio 23/09/2020
Dihy fanatanjahantena: vita ny famindram-pahefana 23/09/2020
Lomano-Filaharana Afrika: mbola “top 10” i Murielle 23/09/2020
Kitra – “UEFA Club Football Awards 2020”: hifampitady i Neymar sy i Mbappé ary i Lewandowski 23/09/2020